Diyo post :: शिखर वार्ताको लागि सिंगापुर पुगे उत्तर कोरियाली नेता किम, ट्रम्प पनि केही बेरमै पुग्ने ! शिखर वार्ताको लागि सिंगापुर पुगे उत्तर कोरियाली नेता किम, ट्रम्प पनि केही बेरमै पुग्ने ! - Diyo post
शिखर वार्ताको लागि सिंगापुर पुगे उत्तर कोरियाली नेता किम, ट्रम्प पनि केही बेरमै पुग्ने !
काठमाडौँ । उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन सिंगापुर पुगेका छन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनबिच हुने शीखर वार्ताको लागी उनि सिंगापुर पुगेका छन । एयर चाईनाको चाङगी विमानस्थल उत्रेका उनलाई स्वागत गर्न सिंगापुरका विदेशमन्त्री भिभिएन वालाकृष्नन पुगेका थिए ।
किम र अन्य प्रतिनिधिहरु सेन्ट रेगिस होटलमा बस्ने छन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पनि आजै सिंगापुर पुग्ने बताईएको छ । ट्रम्प र उनबिच सिंगापुर स्थित सेन्तासा आईल्याण्डमा रहेको होटल क्यापेलामा शीखर वार्ता हुनेछ । विश्वका दुई ठुला नेतहरुलाई गोर्खा प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्ने बताईएको छ ।
यसअघि वार्ताको सन्दर्भमा अमेरिकाको तर्फबाट विभिन्न टिकाटिप्पणी आईरहेता पनि वार्ता हुने निश्चित भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले केही समयअगाडी उत्तर कोरियासंग वार्ता नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ह्वाईट हाउसले दुई देशका नेताहरुविचको शीखर वार्ताले विश्वमा शान्तिको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । वासिङटनले यो बैठक फल्दायीहुने र उत्तर कोरिय निशष्त्रिकरणको बाटोमा अग्रसर हुने विश्वास लिएको छ। यो बैठकबाट कोरियाको विभाजनपछि दुई कोरिया र अमेरिका कोरिया सम्बन्ध विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ।